3 Courses ho mpitsikilo amin'ny PMP
Project Management Professional (PMP) dia manolotra fankasitrahana maneran-tany ny Manam-pahaizana momba ny matihanina avy amin'ny Project Management Institute (PMI). Angamba fantatrao fa misy 729,552 amin'izao fotoana izao PMP olona manana mari-boninahitra & 284 voatahiry toko manerana ny firenena sy faritra 210 manerantany. Innovative Technology Solutions manolotra (PMP) fiofanana PMP ao Gurgaon, Noida, Delhi NCR, manerana ny tanàna 9 any India, Etazonia, UK ary Aostralia. Manolotra torolàlana amin'ny aterineto ihany koa ny ITS amin'ny Fandefasana tetikasa momba ny fitantanana ny tetikasa momba ny fitantanana ny tetikasa mba hisoratra anarana amin'ny aterineto.
Fanofanana momba ny fitantanana ny tetikasa Professional Training
Iza no tokony hampiharina?
Mifidiana ary ampiharo ny PMP
2. Fandaharanasam-pandraharahana (PgMP)
Mitadiava ary tandremo ny PgMP
3. Mpandraharaha azo antoka momba ny fitantanana ny tetikasa (CAPM)
Haka sy hitazona ny CAPM
Ny Project Management Professional (PMP) no sehatra indostrialy tena ilaina indrindra ho an'ny mpanara-maso ny tetikasa.
Azonao atao ny mahita tetik'asa ataon'ny PMP amin'ny ankamaroan'ny firenena, ary tsy toy ny fanamarinana samihafa izay mifantoka amin'ny geology na faritra iray manokana, ny PMP® dia tena maneran-tany. Amin'ny maha PMP anao, afaka miasa amin'ny sehatra indostrialy ianao, miaraka amin'ny rafitra rehetra sy amin'ny faritra rehetra.
Ny PMP koa dia manitatra ny fahafaha mahazo anao. Ny tompom-pahazoan-dàlana PMP dia mahazo ny 20 isan-jato noho ny mpiara-miasa tsy voamarina araka ny tondroin'ny Power Earnings: Project Management Salary Survey, ny fizarana faha-9.
Ny tombony ho an'ny orinasa ihany koa. Raha toa ka mihoatra ny 33% amin'ny lehiben'ny tetik'izy ireo ny PMP-certified, ny fikambanana dia mamita betsaka ny tetikasany amin'ny fotoana, ny fandaniana ny drafitra sy ny tanjona manokana. (Beat of the Study®, PMI, 2015.)
Ny PMP dia manamarika fa miresaka sy manazava ny fitenin'ny manerantany manerantany ny tetikasa maneran-tany ianao ary mampifandray anao amin'ny vondrona matihanina, fikambanana ary manam-pahaizana manerantany. Nihodina ho PMP ary nivadika ho olo-masina.
Raha toa ka mpandrindra ny tetikasa manatanteraka ny tetik'asa rehetra amin'ny tetikasa, manara-maso sy mandrindra ny vondron'olona ifotony, dia ny PMP no fanapahan-kevitra marina ho anao.
Ny fanadinana momba ny fanamarinana dia manana fanontaniana momba ny fanapahan-kevitra momba ny 200, ary manana adiny efatra ianao hamaranana azy.
Raha te hanohy ny PMP ianao, dia tokony handresy fanatontosana fanatanjahantena 60 (PDUs) toy ny famantaranandro.
Amin'ny maha-mpanara-maso ny fandaharam-pianarana anao, manam-pahaizana momba ny zokiolona ianao eo am-pelatànanao ny tanjaky ny fikambanana misy anao. Mifanaraka amin'ny tetikasa samihafa, mifandraika amin'ny tontolon'ny asa ianao, ary manatanteraka tombontsoa mety tsy hitranga raha mikarakara manokana ny tetikasa.
Ny fitantanananao dia fitaovana. Amin'ny fampivoaran'ny fitantanana ny programa, ny tetikasan'ny fikambanana dia mamokatra kokoa noho ny tsy misy azy - 76 isan-jato dia mifanohitra amin'ny 54 isan-jato ary isaky ny taon-dasa Pulse of Profession®. Ny Programa Management Manager Professional (PgMP) ® dia mampiseho mazava ny fahatakaranao sy ny fahaizanao misosa ary manome anao toerana tsy azo hajaina tsara amin'ny asa sy ny fandrosoana.
Amin'izao fotoana izao dia misy ny tetikasa PgMP, izay mety hampahafantarana ny tetikasam-pampandrosoana maro samihafa.
Ho fanombohana ny fotoana hanaovana fanamarinana dia ny fanaraha-maso ny birao
Ny fanadinana momba ny fanamarinana dia manana fangatahana fanapahan-kevitry ny 170, ary manana adiny efatra ianao hamaranana azy.
Raha te-hitazona ny PgMP ianao, dia tokony hahazo ny singa fampitomboana 60 (PDU) amin'ny fotoana fohy.
Na eo aza ny fikarakaranao, ny Associated Certified in Project Management (CAPM) ® dia tombontsoa izay hahafantaranao anao amin'ny tsenan'ny asa ary hanatsara ny fahamarinanao sy ny fahamendrehanao amin'ny fanaovana shot na - amin'ny vondrona tarika.
Ny fikambanana miaraka amin'ny fomban-drazana ara-panjakana dia mamita ny vokatra tsara kokoa, toy ny hita tao amin'ny tatitra farany momba ny Pulse of Profession®. Hatramin'ny CAPM® dia mahita ny fahalalanao momba ny fenitra manerantany manerana izao tontolo izao, ianao dia hivoaka ho mpiadina ary ho vonona hanoso-kevitra.
Ny fitantanana ny tetikasa dia antso an-kalalahana haingana. Amin'ny 2020, tapitrisa 1.57 tapitrisa no hatao isan-taona ary tadiavina ireo matihanina matihanina. Miaraka amin'ny CAPM, dia ho eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazan'ny toe-javatra ianao.
Raha toa ianao ka mitsambikina amin'ny fahafahana manara-maso ny tetikasa lehibe sy mahazo adidy na mampiditra ny fahaiza-mitantana ny tetikasa eo amin'ny ampahany amin'izao fotoana izao, dia ny mpiasam-panjakana voamarina ao amin'ny Project Management (CAPM) dia mety aminao.
Ny fanadinana momba ny fanamarinana dia manana fanadihadiana samihafa momba ny 150, ary manana ora telo ianao hamaranana azy.
Mba hanohizanao ny CAPM dia tokony averinao indray ilay fanadinana toy ny famantaranandro.